Bible Mu Nsɛm Woyi Wɔn Fi Afiase - Yehowa Adansefo Intanɛt Dwumadibea
HWƐ ɔbɔfo a okura afiase pon a wɔabue no mu no. Nnipa a ɔrema wɔafi adi no yɛ Yesu asomafo. Ma yɛnhwɛ nea ɛmaa wɔde wɔn koguu afiase no.
Na wohwiee honhom kronkron no guu Yesu asuafo no so no nkyɛe koraa. Nea ɛbae ni: Na Petro ne Yohane rekɔ asɔrefi hɔ wɔ Yerusalem da koro awia. Na ɔbarima bi bɛn pon no ano a wayɛ obubuafo ne nkwa nna nyinaa. Na nkurɔfo de no bɛto ha da biara na watumi asrɛsrɛ sika afi wɔn a wɔrekɔ asɔrefi hɔ no nkyɛn. Bere a ohuu Petro ne Yohane no, ɔsrɛɛ wɔn sɛ wɔnkyɛ no biribi. Ná dɛn na asomafo no bɛyɛ?
Wogyina hwɛɛ ɔbarima a n’ade yɛ mmɔbɔ no. Petro kae sɛ: ‘Minni sika, nanso mɛma wo nea mewɔ. Yesu din mu sɔre na nantew!’ Afei Petro soo ɔbarima no nsa nifa maa no so, na amonom hɔ ara ɔsɔree na ofii ase nantewee. Bere a nkurɔfo no huu eyi no, wɔn ho dwiriw wɔn na wɔn ani gyei wɔ anwonwade yi ho.
Petro kae sɛ: ‘Onyankopɔn a onyan Yesu fii awufo mu no tumi so na yɛnam yɛɛ anwonwade yi.’ Bere a ɔne Yohane rekasa no, nyamesom mpanyimfo bi bae. Wɔn bo fuwii efisɛ na Petro ne Yohane reka Yesu a wɔanyan no afi awufo mu ho asɛm akyerɛ nkurɔfo no. Enti wɔkyeree wɔn de wɔn koguu afiase.
Ade kyee no nyamesom mpanyimfo no yɛɛ nhyiam kɛse bi. Wɔde Petro ne Yohane ne ɔbarima a wɔsaa no yare no bae. Nyamesom mpanyimfo no bisae sɛ: ‘Tumi bɛn na mode yɛɛ anwonwade yi?’
Petro kae sɛ ɛyɛ Onyankopɔn a onyan Yesu fii awufo mu no tumi. Ná asɔfo no nhu nea wɔnyɛ, efisɛ na wɔrentumi nka sɛ saa anwonwade kɛse yi ansi. Enti wɔbɔɔ asomafo no kɔkɔ sɛ mma wɔnka Yesu ho asɛm bio, na wogyaa wɔn.
Nna no mu no asomafo no kɔɔ so kaa Yesu ho asɛm na wɔsaa nkurɔfo yare. Anwonwade ahorow yi ho asɛm terɛwee. Enti nnipa a wofi Yerusalem nkuraase de ayarefo baa asomafo no nkyɛn. Eyi maa nyamesom mpanyimfo no ani beree, enti wɔkyeree asomafo no koguu afiase. Nanso wɔankyɛ wɔ hɔ.
Anadwo no Onyankopɔn bɔfo buee afiase pon no, sɛnea wutumi hu wɔ ha no. Ɔbɔfo no kae sɛ: ‘Monkɔ nkogyina asɔrefi hɔ na monkasa nkyerɛ nkurɔfo no.’ Ade kyee no, bere a nyamesom mpanyimfo no somae sɛ wɔnkɔfa asomafo no mmra no, na wonni hɔ. Akyiri yi wohui sɛ wɔrekyerɛkyerɛ wɔ asɔrefi hɔ, na wɔde wɔn baa Sanhedrin asa so hɔ.
Nyamesom mpanyimfo no kae sɛ: ‘Yɛahyɛ mo sɛ ɛnsɛ sɛ moka Yesu ho asɛm bio. Nanso mode mo nkyerɛkyerɛ no ahyɛ Yerusalem nyinaa ma.’ Ɛnna asomafo no buae sɛ: ‘Ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn sɛ sodifo sen nnipa.’ Enti wɔkɔɔ so kaa “asɛmpa” no. So eyi nyɛ nhwɛso pa a ɛsɛ sɛ yedi akyi?
Asomafo Nnwuma ti 3 kosi 5.
Asɛm bɛn na ɛtoo Petro ne Yohane da koro awia bi a wɔrekɔ asɔrefi hɔ no?
Asɛm bɛn na Petro ka kyerɛɛ obubuafo bi, na dɛn na Petro de maa no a ɛsom bo koraa sen sika?
Adɛn nti na nyamesom mpanyimfo no bo fuwii, na dɛn na wɔyɛɛ Petro ne Yohane?
Dɛn na Petro ka kyerɛɛ nyamesom mpanyimfo no, na dɛn na wɔbɔɔ asomafo no kɔkɔ sɛ mma wɔnnyɛ?
Dɛn na ɛhyɛɛ nyamesom mpanyimfo no anibere, nanso bere a wɔde asomafo no koguu afiase ne mprenu so no, dɛn na esii?
Mmuae bɛn na asomafo no de mae bere a wɔde wɔn baa Sanhedrin asa so no?
Kenkan Asomafo Nnwuma 3:1-10.
Ɛwom sɛ wɔmmaa yɛn tumi a yetumi de yɛ anwonwade nnɛ de, nanso ɔkwan bɛn so na Petro nsɛm a ɛwɔ Asomafo Nnwuma 3:6 no boa yɛn ma yehu bo a Ahenni nkrasɛm no som? (Yoh. 17:3; 2 Kor. 5:18-20; Filip. 3:8)
Kenkan Asomafo Nnwuma 4:1-31.
Sɛ yehyia ɔsɔretia wɔ ɔsom adwuma no mu a, ɔkwan bɛn so na ɛsɛ sɛ yesuasua yɛn nuanom Kristofo a wɔtraa ase afeha a edi kan mu no? (Aso. 4:29, 31; Efe. 6:18-20; 1 Tes. 2:2)
Kenkan Asomafo Nnwuma 5:17-42.
Ɔkwan bɛn so na wɔn a wɔnyɛ Adansefo binom ada ntease adi wɔ asɛmpaka adwuma no ho wɔ tete ne nnɛ mmere mu? (Aso. 5:34-39)